ဆည်ပေါင်ပေါ်တွင် မောင်းနှင်သည့်ယာဉ်တစ်စီး ဆည်ပေါင်ပဲ့ကျမှုကြောင့် ရေထဲပြုတ်ကျကာ သုံးဦးသေ? - Yangon Media Group
ဆည်ပေါင်ပေါ်တွင် မောင်းနှင်သည့်ယာဉ်တစ်စီး ဆည်ပေါင်ပဲ့ကျမှုကြောင့် ရေထဲပြုတ်ကျကာ သုံးဦးသေ?
မင်းလှ၊ မတ် ၂၉- ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကြီး မင်းလှမြို့နယ်တွင် ဆည် ပေါင်ပဲ့ကျအောင် မောင်းနှင်ခဲ့ သည့် မော်တော်ယာဉ် မြောင်းထဲ ထိုးကျကာ သုံးဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မင်းလှမြို့နယ် စစ်ကွင်းနယ်မြေရဲစခန်းအပိုင် ခွက်မ-မကျည်းကွင်း ဆည်ပေါင် လမ်းပေါ်တွင် မတ် ၂၉ရက် နံနက် ၇နာရီခွဲခန့်က ခွက်မဘက်မှ မ ကျည်းကွင်းဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ချစ်တီး(၃၅)နှစ်မောင်းနှင်ပြီး ကျော် လေး၊ ကျော်ဇင်ညွန့်၊ ဖြိုးဝေအောင်၊ ဌေးဝင်း၊ ဦးစိန်ထွန်းတို့ လိုက်ပါ လာသည့် ငျြညေ အမျိုးအစား ခြောက်ဘီးယာဉ် (ယာဉ်လိုင်စင် မရှိ)မှာ သစ်၊ မီးသွေး ၊ ဝါးများ သယ်ဆောင်မောင်းနှင်လာစဉ် စီ တုန်းအုပ်စု၊ ရှားဖြူကွင်း ကျေးရွာ အနီးအရောက်တွင် ဆည်ပေါင် ပဲ့ကျကာ ယာဉ်မှာ လမ်း၏ဝဲဘက် ခြမ်းရေထဲသို့ ထိုးကျတိမ်းမှောက်ခဲ့ သည်။
မော်တော်ယာဉ် ရေထဲသို့ ထိုးကျတိမ်းမှောက်ခဲ့မှုကြောင့် မင်းလှမြို့နယ် စမ်းဘုတ်ရွာနေ ကျော်လေး (၁၅)နှစ်၊ လက်ပံတန်း မြို့နယ် မကျည်းကွင်းရွာနေ ဖြိုးဝေ အောင် (၂၅)နှစ်နှင့် မအူတန်းရွာ နေ ကျော်ဇင်ညွန့်တို့မှာ သစ်လုံး များ ပိမိကာ သေဆုံးခဲ့ပြီး ယာဉ် မောင်း ချစ်တီးမှာ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်သွားခဲ့သည်။
မော်တော်ယာဉ်အား မဆင် မခြင် မောင်းနှင်သူ ချစ်တီးအား စစ်ကွင်းနယ်မြေရဲစခန်းက ယာဉ် (ပ)၃/၂ဝ၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ဝ၄(က)ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး ယာဉ်မောင်းချစ်တီးအား ဖမ်းဆီး ရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ွှံ
ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ဟယ်ရီကိန်း MBE ဘွဲ့ချီးမြှင့်ခံရ ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု??